Otú nyefee Music si iTunes ka Nexus 5/7/10/4
Otú nyefee Music / songs si iTunes ka Nexus 5 / Nexus 7 / Nexus 10 / Nexus 4
Otú nyefee Music si iTunes ka Nexus 5 / Nexus 7/10/4
Otú ọ dị, iTunes bụ ọkachamara iPhone, iPod na iPad njikwa, nke na-adịghị ka ị nyefee music gị Nexus 5. N'ihi ya, ị ga-agwa enyemaka si a 3rd otu ngwá ọrụ nyefee music si iTunes ka nexus 5. Otu 3rd ọzọ ngwaọrụ, Wondershare TunesGo ukwuu tụrụ aro. ọ na-eme ya nnọọ mfe nyefee iTunes listi ọkpụkpọ gị Nexus 5/7/10/4.
Method 1. Chọta iTunes Media nchekwa na Copy iTunes Songs ka Nexus 5/7/10/4
Method 2. Nyefee iTunes Music ka Nexus 5/7/10/4 na a Nke atọ Party Ngwá Ọrụ t
Method 1. Chọta iTunes Media nchekwa na Copy iTunes Songs ka Nexus 5 / Nexus 7 / Nexus 10 / Nexus 4
Na akụkụ 2, Aga m na-egosi gị otú nyefee music si iTunes ka Neuxs 5/7/10/4. Gịnị ma ọ bụrụ na unu achọghị ịzụta ọ bụla software ma na-eme iTunes ka Nexus music transfer? E nwere ụzọ. Ọ bụ naanị ntakịrị kemmekpa.
Mepee iTunes na-aga Dezie> Reference ...> Advanced. Ego ma i ticked Copy faịlụ ka iTunes media nchekwa mgbe na-agbakwụnye na ọbá akwụkwọ. Ọ bụrụ otú ahụ, i nwere ike na-aga iTunes media nchekwa.
The iTunes media nchekwa na-echekwa na dị iche iche ebe, dị ka Windows os. Ego ebe a:
Windows 7/8: C: \_ Ọrụ \_ aha njirimara \_ My Music \_ iTunes \_
Ịnyagharịa ka iTunes media nchekwa na-ahụ music nchekwa n'okpuru ya ndekọ. Mepee music nchekwa, ị ga-ahụ songs na-echekwa dị iche iche nchekwa dabere na ha artists.
Jikọọ gị Nexus 5/7/10/4 na kọmputa site na eriri USB. Ngwaọrụ gị ga-ndokwasa dị ka ihe mpụga ike mbanye. Chọta na imeghe ya. Detuo music si iTunes music nchekwa gị Nexus 5/7/10/4.
Method 2. Nyefee iTunes Music ka Nexus 5 / Nexus 7/10/4 na a Ngwá Ọrụ
Dị ka ị maara, Mac kọmputa na-kere Apple na ya nwere ike na-adịghị aghọta Android ngwaọrụ. Ị nwere ike ghara efego Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba dị ka ihe mpụga ike mbanye na mgbe ahụ idetuo iTunes music na ya. Ọ bụrụ na ka nke a, Wondershare TunesGo (Mac) ma ọ bụ Wondershare TunesGo maka Android (Win) abịa maka gị. Na ya aka, ị nwere ike mfe nyefee niile ma ọ bụ họrọ music na listi ọkpụkpọ site na iTunes ka Nexus 5/7/10/4 effortlessly. Download software na-enye ya a ogbugba.
Download na wụnye Wondershare TunesGo on Mac ma ọ bụ PC.
Jikọọ gị Google Nexus 5/7/10/4 ka Mac site ịkwụnye n'ime eriri USB.
Gbaa ndị software na Mac ga na-echetara gị ma ọ bụrụ na-agba ọsọ iTunes kwa. Soro ya. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ Wondershare TunesGo na-egosi na n'akụkụ aka nri nke iTunes.
Ke akpan window nke TunesGo, pịa mmekọrịta tab.Then, ị nwere ike họrọ ma mmekọrịta dum iTunes n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ mmekọrịta họrọ iTunes music, fim na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka Nexus 5/7/10/4. Họrọ otu nhọrọ wee pịa mmekọrịta.
Ma ọ bụ, ị nwere ike pịa Dọrọ & dobe taabụ, na ikpuru na dobe gị chọrọ music na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka Google Nexus 5/7/10/4.
Nyefee iTunes Music ka Android
A Great Alternative ka Android File Nyefee
Best 4 Alternatives ka doubleTwist
2 Ngwọta n'ihi na iTunes mebie ndabere
> Resource> iTunes> otú nyefee Music / songs si iTunes ka Nexus 5 / Nexus 7 / Nexus 10 / Nexus 4